वायु प्रदुषणका कारण ‘विर्तामोड’ बस्न अयोग्य – तहल्काखबर
पर्यावरण समाचार स्थानीय स्वास्थ्य
विर्तामोड / हामी बस्ने शहरको वायु स्वच्छ वा प्रदुषित कस्तो छ भनेर हामीले कहिल्यै सोचेका छौं ? विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा हामीले स्वास प्रस्वास गर्ने वायुको अवस्था के छ भनेर दुई मिनेट घोत्लिएर सोचेका छौं ? हामीलाई सोच्ने फुर्सदै छैन । फुर्सद भए पनि हामी त्यस्ता विषयलाई महत्व नै दिंदैनौ । प्रदुषण नियन्त्रणका विषयमा बुझेर पनि हामी बुझ पचाउछौं।
तसर्थ, प्रदुषण नियन्त्रणका बारेमा अब पनि हामीले सोचेनौ भने धुलो धुँवा र प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा कहाली लाग्दो अवस्था आउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
पूर्वको व्यापारिक नगर विर्तामोडको अवस्था त झन वातावरणीय प्रदुषणका हिसाबले अत्यन्तै जोखिमयुक्त देखाएको छ । विर्तामोडमा रहेर सुचना प्रविधीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था प्रयास प्रारम्भ प्रालिले विर्तामोड नगरको वायु प्रदुषणको क्षेत्रमा गरेको एक अध्ययनले त्यस्तो देखाएको हो ।
प्रयास प्रारम्भले मंगलबार विर्तामोड क्षेत्रमा बढ्दो बायु प्रदुषण कारण र न्यूनिकरणका उपाय विषयक यहाँका सरोकारवालाहरुलाई डाकेर एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । अन्तरक्रियामा वायु प्रदुषणको अवस्था कारक तत्व र न्यूनिकरणका उपाय बारे छलफल समेत भयो ।
प्रयास प्रारम्भले विर्तामोड नगरपालिकाको वडा नं ४ र ५ वायु प्रदुषणका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो । वडा नं ४ र ५ मा विशेष गरी विर्तामोडको मुख्य बजार क्षेत्र पर्दछ । सव्जीमण्डी (बुधबारे हटिया), मुक्तीचोक, भद्रपुररोड, पुर्वस्टेण्ड, पश्चिमस्टेण्ड, शनिश्चरेरोड यिनै वडामा पर्दछ । यहाँ सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने गर्दछ ।
त्यसमाथि भद्रपुररोड सडक निर्माणकार्य भइरहेकोले त झन प्रदुषणको मापन गर्ने असस्थै छैन । विर्तामोड बजारबाट निस्कने फोहर, तरकारी बजारबाट निस्कने फोहर, सवारी साधनको ध्वनी, सडकबाट उडेको धुलो, प्लाष्टिक जन्य बस्तु डढाएर निस्कने धुँवालगायतका कारण वातावरण अत्यन्तै निसासिँदो भएको प्रयास प्रारम्भ प्रालिका सहजकर्ता अकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
वायु प्रदुषबाट उत्पन्न हुने धुलोको २ दशमलव ५ माइक्रोन कण हामीले स्वासप्रश्वास गर्दा, छालाको छिद्रबाट पनि सजिलै भित्र छिर्नसक्ने हुने हुँदा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक रहेको प्रयास प्रारम्भका निर्देशक लोकप्रिय खनालले बताए ।
आफु बसेको कोठाको मात्र वायुको अवस्था र क्षमता मापन गर्ने सक्ने सानो ‘एयर क्लालिटी मोनिटरीङ डिभाइस’ ले मापन गर्दा मात्रै पनि विर्तामोडको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा काठमाण्डौ बाहिर पूर्वमा सुनसरीको झुम्कामा मात्र वायु प्रदुषण मापन यन्त्र जडान गरिएको छ ।
प्रदुषित वायुका कारण बालवालिका, बृद्धबृद्धा, असक्त, सुत्केरी महिलाहरुलाई बढी समस्या देखिने गर्दछ । यसले बालबालिकामा नसर्ने प्रकृतीका जटिल रोग पनि निम्त्याउने खतरा रहन्छ ।
यसले मानिसमा छालाको एलर्जी, छालाको प्रतिरक्षामा कमि, किड्नी र कलेजोमा असर, आस्थ्मा ,ब्रोकाइटिस, क्यान्सर, हृदयघातजस्ता समस्या हुनुको साथै गर्भको शिशु अपाङ हुने र आमालाई पनि असर गर्दछ । वायु प्रदुषणले स्वास्थ्यको साथै कृषि ,पर्यटन, शिक्षा र जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।
विर्तामोडमा वायु प्रदुषणका श्रोतहरु मध्ये १५ भन्दा बढी इटाभट्टाहरु, ३० भन्दाबढी कलकारखाना, सिमेन्ट उद्योग, हस्पिटल, होटल, विद्यालय र हजारौ सवारीका साधन रहेको तथ्याङक छ ।
प्रदुषणको मुख्य श्रोत भनेको मानिसले घरबाट फालेको प्लाष्टिकजन्य फोहर रहेको र त्यो जदाउँदा निस्कने धुवाँ बढी खतरनाक हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
विर्तामोड वडानं ५ मा मात्रै घरबाट निस्कने मिश्रीत फोहर जलाउने ४० वटा स्थान रहेका छन् ।
प्रति केजी मिश्रित फोहर जलाउँदा ७ दशमलव ४ ग्राम पिएम टु पोइन्ट फाइभ पार्टिकुलेट म्याटर, ३ दशमलव ३ ग्राम व्ल्याक कार्वन, १ हजार ६ सय २ ग्राम कार्वनडाइ अक्साइड, ८४ दशमलव ७ ग्राम कार्वन मनोअक्साइड, ३ दशमलव ९७ ग्राम मिथेन र १ दशमलव ०६ ग्राम नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास निस्कने गर्दछ ।
हालै गरिएको एक अध्ययनले वायु प्रदुषणबाट हुने मृत्युमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको दखाएको थियो । त्यस्तै, वायु प्रदुषणमा नेपाल विश्वको ५ खराब मुलुकको सुचिमा परेको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रणका लागि प्रदुषण सम्बन्धि अझै तथ्याङ्क र डाटा आवश्यक, व्यवस्थित फोहोरमैला व्यवस्थापन, फोहर जलाउने कार्यमा रोक, सडक पेटीमा वृक्षरोपण, हरियो स्टीकरको प्रावधान, साइकल मैत्री सडक, विद्युतीय बसको व्यवस्था र सार्वजनीक बसलाई प्राथमिकता दिएको खण्डका केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विर्तामोड वडानं ४ र ५ का वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था, क्याम्पसलगायत उपस्थित थिए ।
अन्तरक्रियामा विर्तामोड वडा नं ५ का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, वडा नं ४ का अध्यक्ष कुलप्रसाद संग्रौला, न्यूटन्स एजुकेशन एकाडेमीका प्रिन्सिपल, गोमेन्द्र विर्तामोडलका प्रिन्सिपल उत्तम खनाल, सरसफाइ आभियन्ता भरत बस्नेतलगायतले वायुप्रदुषणबारे आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुले विर्तामोडको अवस्था चिन्ताजनक हुन नदिन प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । विर्तामोड सरसफाईका अभियन्ता बस्नेतले फोहरमैला व्यवस्थापनमा सबैभन्दा पहिले व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा एयर साउथ एसिया, क्लिन अप नेपाल, विर्तामोड सरसफाई अभियानलगायतका संघ संस्थाहरुको उपस्थिति थियो ।
← विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरण सम्बन्धी अन्तरक्र्रिया सम्पन्न
वीरता जेसीजलाई देशभरकै ‘सर्वोत्कृष्ट शाखा’ सहित दुई पुरस्कार →